“Ary hahalala ny fitiavan’i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin’ny fahafenoan’Andriamanitra rehetra.”Efes. 3:19
Ny fahafaha-manaon’ny fahasoavana tsirairay dia tokony hampitomboina amim-pahamalinana mba hitobahan’ny fitiavan’Andriamanitra eo amin’ny fanahy hatrany hatrany, “mba hamantaranareo izay zavatra tsra indrindra , mba ho madio am-po ary tsy hanan-tsiny ho amin’ny andron’i Kristy hianareo,s ady feno ny vokatry ny fahamarinana , izay avy amin’ny alalan’i Kristy, ho voninahitra sy fiderana ho an’Andriamanitra” Fil. 1:10,11. Ny fiainana maha kristianina anao dia tsy maintsy miorina amin-kery sy amin’ny endrika mahatoky. Afaka ny hahatratra ny fenitra avo indrindra eo anoloanao ao amin’ny Soratra Masina ianao, ary tsy maintsy ho izany raha tianao ny ho zanak’Andriamanitra. Tsy afaka ny hijanona eo amin’ny toerana iray ka tsy hihetsika ianao; tsy maintsy mandroso ianao na mihemotra. Tsy maintsy manana fahalalana ara-panahy ianao,”mba hahaizanareo mbamin’ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary hahavony sy halaliny ary hahalala ny fitiavan’i Kristy, (...) mba hamenoana anareo ho amin’ny fahafenoan’Andriamanitra rehetra” (...)
Te hanana fitomboana kristanina voafetra ve ianao , sa te hanana fandrosoana ara-dalàna amin’ny fiainana miaraka amin’Andriamanitra? Eo amin’izay misy fahasalamana ara-panahy no misy fitomboana. Ny zanak’Andriamanitra dia mitombo ho amin’ny fahafenoan’ny fahalebezan’ny lehilahy na ny vehivavy ao amin’i Kristy. Tsy misy fetra ny fivelarany (...).
Manana fandresena maro tokony ho azo isika, ary lanitra iray ho very raha toa ka tsy azontsika izy ireo. Tsy maintsy homboana ny fo nofo; satria ny fironany dia mankany amin’ny fahalovana ara-môraly , ary ny fiafarany dia ny fahafatesana avy eo. Tsy misy na inona na inona ankoatra ny hery miasa manginan’ny fanomezan’ny fiainana avy amin’ny filazantsara afaka afaka manampy ny fanahy. Mivavaha mba hisian’ny hery tsitohan’ny Fanahy Masina , miarakamin’ny fanafainganany rehetra, mamerina amin’ny laoniny ary hery manova, hilatsaka tahaka ny donan-kerinnaratra eo amin’ny fanahy malemin’ny aretina mahatonga ny retsika tsirairay hangorovitsika noho ny fiainam-baovao, mamerina amin’ny laoniny ilay olona manontolo avy amin’ny fahafatesany , ny maha-mponin’ny tany azy, ny toetra mora tohina ho amin’ny fahadiovana ara-panahy. Araka izany dia ho tonga mpiombona amin’ny maha-Andriamanitra ianareo , afaka nandositra ny fahalovana izay eo amin’izao tontolo izao amin’ny alalan’ny fahafinaretana ; ary hitaratra ao amin’ny fanahinareo ny Endriny izay ny dian-kapoka taminy no nahasitrana anareo.